अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण ससुराली जान नपाएपछि खुलेको ‘ससुराली क्याफे’ - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण ससुराली जान नपाएपछि खुलेको ‘ससुराली क्याफे’
बिहीबार, भदौ १७ २०७८
जातीय विभेद हटेको घोषणा भएको जुगौँ भइसक्यो तर पनि आजसम्म त्यसले समाजमा जरा गाडेकै छ । पछिल्ला केही घटनाहरूलाई नियाल्ने हो भने जातीय विभेदको अन्त्य केवल घोषणा र घोषणापत्रमा मात्र सीमित रहने निश्चित छ । यस्तै एउटा विभेदको सिकार भएका थिए, युवा व्यवसायी सुमन मंग्राती ।
उनी अहिले पनि स्मरण गर्छन्, त्यी पल । जुन पल उनलाई एउटा फिल्मको कथाभन्दा कम लाग्दैनन् । अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण दुई परिवारबिचको टकराबको अनुभव सँगालेका सुमन लामो समय ससुराली जान पाएका थिएनन् । २०७१ सालमा उनले खतिवडा थरकी युवतीसँग विवाह गरेका थिए । तर ससुरालीले ज्वाइँलाई स्विकारेनन् ।
. इन्डियन आर्मीको जागिर छोडेर ड्रागन फ्रुट्स खेतीमा जम्दै तीन युवा !
. जुत्ता सिलाएरै ५/६ जनाको परिवार पाल्नेहरूको कथा
. अष्ट्रेलिया छोडेर आफ्नै गाउँमा बाख्रा पालन गर्ने युवकको मासिक आम्दानी १ लाख
लामो समय ससुराली जान नपाएका उनले लकडाउन अवधिमै क्याफे हाउस सञ्चालन गर्ने सोच बनाए र क्याफे हाउसको नाम नै ससुराली राख्ने निधो गरे, जसमा मित्र रञ्जित अग्रवालको साथ पाए । अहिले ससुराली क्याफेका सञ्चालक विराटनगर–४ का ३० वर्षीय सुमन मग्राती र ५५ वर्षीय रञ्जित अग्रवाल हुन् ।
फरक नाम र फरक अवधारणासहित असार २५ गतेदेखि विराटनगर–७ स्थित हनुमानदास रोडनजिकै ४० लाखको संयुक्त लगानीमा ससुराली क्याफे सञ्चालन गरिएको छ । नामका कारण महिना दिन नबित्दै राम्रो चर्चा बटुलेको उक्त क्याफेले युवाहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ ।
चिया–खाजा खान ‘ससुराली’ जान रुचाउने युवाहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दो क्रममा देखिन्छ । हाल विराटनगरमा सञ्चालित क्याफे हाउसमध्ये सबैभन्दा बढी ग्राहकको भिड हुने ठाउँ हो– ससुराली क्याफे । करिब एक कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त क्याफे हाउस बबल–टी, सेलरोटी, रायतासहितको ससुराली खाजाका लागि प्रख्यात छ । नामकै कारण उक्त क्याफे हाउसप्रति युवाहरूको आकर्षण बेग्लै छ ।
अन्तरजातीय विवाह गरेका सुमनले जातीय विभेदका कारण ससुराली घर जान नपाएको न्यास्रो मेटाउन क्याफेको नाम ‘ससुराली’ राखेका हुन् । हाल ससुराली क्याफे एन्ड रेस्ट्रोमा पिज्जा, बर्र्गर, मःमः, चाउमिन, चिया, कफी, चिली आइटम, कट्टी–रोललगायत फास्ट–फुड आइटम पाइन्छन् ।
सञ्चालक सुमनका अनुसार क्याफेले तीन कुकसहित ११ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ भने दैनिक २० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरिरहेको छ । विशेषगरी बजारमा कतै बसेर एक छिन कुराकानी गर्ने ठाउँको खाँचोसमेत अनुभव हुँदै गएको अवस्थामा ससुराली क्याफेले त्यस्तो अप्ठेरोलाई सम्बोधन गरेको ससुराली क्याफेका सञ्चालक सुमनले बताए ।
उनले बैकिङ क्षेत्रका कर्मचारी र मध्यम वर्गीय परिवारलाई लक्षित गरेर क्याफे सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । ‘ठुलो होटेलमा जाउँ महङ्गो पर्छ । सानो होटेलमा जाउँ चित्त बुझ्दैन,’ उनले भने, ‘त्यही बिचको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न हामीले क्याफे सञ्चालनमा ल्याएका हौँ ।’
Tags :सफलताको कथा
छैन कुलमानको प्रभाव : विराटनगरमा सुरु हुनथाल्यो ‘अघोषित् लोडसेडिङ’ !
एमसिसी नेपालले नै छनौट गरेको परियोजना हो’